အသက်နှင့် ပတ်သက်၍ famousမာနွေလကန့်၏ကျော်ကြားသောကိုးကားချက် ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒphilosophနိကဗေဒကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ အီမန်နူဝဲလ်ကန့်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသင်ပိုမိုသိနိုင်သည်။ သူသည် ၁၇၂၁ ခုနှစ်တွင် Prussia, Konigsberg တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် "ကန့်" ဟုလူသိများပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အားလုံးတွင်ထိုစဉ်ကဥရောပ၌သြဇာအရှိဆုံးအတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
Hegel နှင့် Schopenhauer တို့နှင့်အတူတကွဂျာမန်အတွေးအခေါ်ပညာကိုသူတို့တီထွင်ခဲ့သည်။ သူ၏လူကြိုက်အများဆုံးလက်ရာများအနက်မှကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ "စင်ကြယ်သောအကြောင်းပြချက်၏ဝေဖန်မှု", "တရားသဖြင့်စီရင်၏ဝေဖန်မှု" သို့မဟုတ် "အကောက်ခွန်၏တက္ကဗေဒ"။ သူ၏ထင်ဟပ်ချက်များကိုမည်သူမျှသတိမပြုမိဘဲထို့ကြောင့်သူ၏ကျော်ကြားသောစကားစုများသည်သင့်အားဘဝအပေါ်အလွန်နက်ရှိုင်းစွာထင်ဟပ်စေလိမ့်မည်။
သူ၏စာပိုဒ်တိုများနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများအရကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစားအလွန်အရေးကြီးသည် စာရေးသူ၏အဆိုအရသူသည်သူတို့၏ဆန္ဒများနှင့်အကျိုးစီးပွားများမည်သို့ပင်ရှိနေပါစေ၊ လူများအားသူပြုမူသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်တာ ၀ န်များကိုပြီးပြည့်စုံသောနှင့်မစုံလင်မှုအကြားခွဲဝေပေးခဲ့သည်။
သူ၏ကျော်ကြားသောစကားစုအများစုကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏စိတ်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်သေချာသည်မှာသင်သည်ဘ ၀ ကိုအခြားရှုထောင့်မှကြည့်မြင်နိုင်လိမ့်မည် သင့်ကိုလူသားတစ် ဦး အဖြစ်ကြီးထွားစေမည့်အတွင်းပိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
Immanuel Kant ၏ကျော်ကြားသောဤကိုးကားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုသိလိုပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသူများအတွက်စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်ကသူတို့ကိုမေ့သွားမည်မဟုတ်ဘဲသင့်လျော်သည်ဟုသင်ယူဆသည့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုသင်ပြန်လည်စဉ်းစားနိုင်လိမ့်မည်။
တစ် ဦး ချင်း၏ဉာဏ်ရည်ကိုသူမထောက်ပံ့နိုင်သည့်မရေရာမှုပမာဏဖြင့်တိုင်းတာသည်။
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများ - လုပ်ရန်တစ်ခုခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ချစ်ရန်၊ မျှော်လင့်ရန်တစ်ခုခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာအားလုံးသည်အာရုံဖြင့်စတင်သည်၊ ထို့နောက်နားလည်မှုသို့ဆက်လက်ရောက်ရှိသွားပြီးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ အကြောင်းပြချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဘာမျှမရှိပါ။
မြေကြီးလမ်းသည်ဆူးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်လူတို့အားလက်ဆောင်သုံးခုပေးသည်။ အပြုံး၊ အိပ်မက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်။
ဝေဖန်သူများကသင့်အားခဲယဉ်းစွာပစ်ချသည့်ကျောက်တုံးများဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြချက်များနှင့်မှန်းဆမှုများနှင့်လက်တွေ့ကျသောအကျိုးစီးပွားများကိုအောက်ပါမေးခွန်းသုံးခုတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာကိုသိနိုင်သနည်း။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ငါဘာတွေမျှော်လင့်ထားနိုင်မှာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ အလုပ်များလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသည်ထက် ပို၍ ခံယူလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို ပို၍ သတိပြုမိလေလေဖြစ်သည်။
ခဏကြာသည်းခံပါ၊ အမှန်တရားသည်အချိန်ကာလ၏သမီးဖြစ်သည်၊ မကြာမီသင့်အားမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြလိမ့်မည်။
သာ illuminated, မှောင်မိုက်အရိပ်မကြောက်။
ပညတ္တိကျမ်းသည်လူတစ် ဦး ချင်း၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူတိုင်း၏လွတ်လပ်မှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်အခြေအနေများဖြစ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်များကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူသည်လူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်လာသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုသူဆက်ဆံပုံနှင့်လူတစ် ဦး ၏နှလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဒါဟာမုန်းတီးမှုသို့မဟုတ်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံရဖို့ဥပဒေတစ်ခုရှိကွောငျးစင်ကြယ်သောလျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်သူကသူတို့တစ် ဦး အားနည်းချက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိ။ ပင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုဆက်လက်?
လွတ်လပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောတရားဆိုင်ရာသီအိုရီဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကမျှဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမရှိသကဲ့သို့သဘာဝတရား၏သဘောတရားသည်လွတ်လပ်မှု၏လက်တွေ့ကျသောဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte ။
လူတစ် ဦး သည်လိမ်လည်မှုကြောင့်ပျက်စီးယိုယွင်းကာလူသားတစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပျက်ပြားစေသည်။
လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာအခြားစွမ်းရည်အားလုံး၏အသုံး ၀ င်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောဌာနဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » အသက်နှင့်ပတ်သက်သော Immanuel Kant ၏ထင်ရှားသောကိုးကားချက် ၄၅ ချက်